Dariiqada Loo Maro Marka La Doonayo in Nafta La Horumariyo |
Marka ugu horraysa ee aad doonaysid in aad horumarisid naftaada waa in aad ogaataa qofka aad tahay. Marka aad taa ogaatid adigu waxa aad bilowdaa in aad horu marisid naftaada, taas waxaan uga jeedaa waa in aad barataa ama ogaataa naftaada waxa ay ku fiicantahay iyo waxa ay ku xuntahay, markaas ayaad horumar gaadhi kartaa. Raac qodobadaan soo socda:
Waa in aad ku kalsoonaataa naftaada oo aad wax hagaajin karto maalinba maalinta ka danbaysa.
Waa in aadan is yaraysan, iskana dhaaftaa in aad soo celceliso erayada naftaada duminaaya sida , waxa aan ahay qof fashilmay oo taagdaran.
Waa in aad ogaataa in aad tahay qof aadami ah, wax soo kordhin kara oo aan ciyaar loo abuurin.
Waa in aad noqoto qof saamaxaad badan dulqaad badan, haddii cidi kugu gefto, hana noqon qof xumaha uruurriya.
Waa in aad aqbali karto haddii dhaliil laguu soo jeediyo, hana u qaadan qof kasta oo ku dhaliilaya in uu cadawgaaga yahay, waxanad aamintaa haddii uu jiro qof ku dhaliilaya in uu jiro mid ku dhiirri gelinaya ama ku ammaanaya.
Waa in aad noqoto qof u fikira si qoto dheer, qof kastaa wuu fikiri karaa si qotodheer haddii uu isku dayo oo uu iska dhaafo waxyaabaha yaryar ee aan faa’iidada lahayn, waxa aad go’aansataa in aad horumar gaadhsiiso noloshaada lagagana daydo waxyaabo faa’iido bulshada u leh, markaa maxaa kuu diidaya in aad u fikirto si qotodheer oo aad diyaariso qorshayaal midho-dhal leh, waa in aad tahay qof himilo leh, garanayana waxa uu noolyahay ee adduunka loo keenay.
Waa in aad la timaaddaa niyad fiican, waayo waxa aad qabanayso haddii aadan niyad u hayn weligaana
La Hadal Naftaada
Magaadhaysid hadafkaaga, waayo niyaddu waa furaha shay kasta oo aad qabanayso.
Waa in aad dedaal samaysaa, dedaal la’aan halka aad u socoto magaadhaysid dedaal ku waa jihadii iyo dariiqii aad u marraysey waxa aad doonaysid in aad gaadho maahmaah soomaaliyeed ayaa tidhaahda “xaglo laaban xoolo kumayimaaddaan” waana wadada horumarka nafta.
Ilaashoo fursadaha ku soo mara hana luminin, waxaa laga yaabaa in aanay mar kale ku soo marin.
Dhibaatooyinka hortaada yaalla ha dhibsanin, u soojeed si aad u xaqiijiso hadafkaaga.
Waa in aad lahaataa macallin aad nolosha kaga dayato ama aad ka dhigato waddadii kuu Fududeynaysey horumarka naftaada ee aad gaadh isleedahay, waa in aad rajo yeelataa si aad ugu guulaysato hadafkaga iyo dhaammaan qaybaha noloshaada.
Ogow Samir ku waa nolosha guusha. Waa in aad ku samirtaa wax kasta oo kaa hor yimaadda inta aad ku guda jirto xaqiijinta horumarka noloshaada, waayo waxa ku horyaalla gocondho badan oo loo bahan yahay in aad kabo adag ka xidhato, kabahaasina waa samirka soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa “samraa sadkii hela” sidaa awgeed, ha u ooyin wax tegay ee ka dhigo cashar. ogow darbadda aan ku dilin in ay ku siyaadinayso awood, majiro wax kaa dhigi karaya qof adag ilaa dhibaato daran mooye. Hoos u dhac kasta oo noloshaada ku yimaadda ha u qaadan gabagabo noloshaada ah.
Naftaada wayddii waxa aad u nooshahay, ma waxa aad u nooshahay in aad waxa adduunka horumar ka dhacaya aad adigu daawade ka noqoto ama aad kiriishboy (Saqeeye) aad ka ahaatid. Ha noqon qof sacabka xagga danbe ka soo tuma, dadka adduunka ku nooli waxa ay u qaybsamaan dhowr qaybood waana ku waan hoos ku xusan:
Qof darawal ah iyo mid kirrishboy ah.
Qof kubbadda ciyaara iyo mid daawada.
Qof macallin ah iyo mid arday ah.
Qof qoraa ah iyo mid akhriste ah.
Qof wax hoggaamiya iyo mid la hoggaamiyo.
Qof/Wadan wax soo saara iyo mid isticmaala.
Qof horumar nolosha ka sameeyey dhinacay doontaba hanoqotee iyo mid dhaliilaya.
Markaa adiga is wayddii su’aashan “Ma waxa aad u nooshahay mar walba in aad nolosha daawade ka noqotid, mise waxa aad u nooshahay in nolosha mararka qaar adiga lagu daawan karo oo aad dadka u sheegtid in aad jirtid, oo waxa aad oo dhan doontaa “noloshu aniga agtayda mihiim ayey ka tahay”. Sida Alle ku sheegay ayaddan(qofka aakhiro doona jidkeedana mara isaga oo mu’min ah, kuwaasi waa qaar la mahadiyey socodkooda).
Tags: Dariiqada Loo Maro Marka La Doonayo in Nafta La Horumariyo
Next post Dadka Adduunka Jooga Qofba Meel Ayuu u Horumaray!
Previous post Siddee Ayaynu u Gaadhi Karnaa Horumar Nafeed?